कोरोना कहरले स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि सुरु - WorldWide Khabar
कोरोना कहरले स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि सुरु
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा बुधबारदेखि सुरु गर्दैछ । कोरोना कहारका कारण यसअघि स्थगित परीक्षा आजबाट सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
यस पटक ३ लाख ७४ हजार विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने जनाइएको छ । परीक्षामा विद्यार्थीलाई होम सेन्टर (विद्यार्थीले अध्ययन गरेकै विद्यालयमा परीक्षा दिने)को व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्यार्थीलाई अरू विद्यालयमा परीक्षा दिन जानका लागि असुविधा हुन सक्ने भएकाले होम सेन्टरको सुविधा दिइएको हो । परीक्षामा यस पटक ४ हजार ३१५ वटा परीक्षा केन्द्र तय गरिएको छ ।
प्रत्येक विद्यार्थीले आ–आफ्नै विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताउनुभयो । परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका विद्यार्थीहरूलाई पछि छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ ।
परीक्षाका लागि तयार पारिएका प्रश्नपत्र बुधवार बिहान साढे १० बजेसम्ममा अनलाइन माध्यमबाट हरेक परीक्षा केन्द्रमा पुर्‍याइने परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. पौडेलले बताए ।
Previous articleमुख्यमन्त्री: बाढी पीडितलाई एक करोड २१ लाख बराबरको राहत
Next articleचोरीका १६ मोटरसाइकलसहित ६ जना पक्राउ
चिनियाँ विदेशमन्त्रीद्वारा अफगानिस्तानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह
राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता
प्रचण्ड: केपी ओली हरुवा, भगौडा हो